Sida loo Xaqiijiyo Codsiga Oggolaanshaha Soo-celinta ee iTunes
Xaqiijinta Dhibaatada Ogolaanshaha Muusikada ee Lagu Ciyaaro Mushaqan La Iibsado
Hel dukaanka mar kale
iTunes wuxuu ciyaari karaa faylal fara badan oo warbaahin ah, oo ay ku jiraan kuwa aad ka iibsato dukaanka muusikada ee iTunes. Waqtiga intiisa badan, Awoodgan aan dhammays tirnayn ee lagu ciyaaro muusikada la iibsaday waa sidan: Laakiin hal mar, iTunes waxay u muuqataa in la iloobo in laguu oggol yahay inaad ku ciyaarto gabayada aad jeceshahay.
Tani waxay u dhici kartaa sababo badan, laakiin nasiib wanaag, si sahlan ayaad u hagaajin kartaa dhammaantood adigoo raacaya hagahan.
Waxaad bilaabi doontaa iTunes, isla marka aad bilowdo inaad heesato hees, iTunes wuxuu kuu sheegayaa in aan laguu oggolayn inaad u ciyaarto. Waxaa laga yaabaa inaad dhageysatid liiska cayaaraha aad jeceshahay , iyo markaad hesho gabay gaar ah , farriinta "aan laguu oggolayn" ayaa soo baxaysa.
Inkasta oo carqaladayntu ay yar tahay, waxaad si deg deg ah u oggolaatay Macadaada adiga oo dooranaya "Awoodsiiya Kumbuyuutarkan" ka Dukaameysiga Dukaanka ee appka iTunes , ka dibna soo geli ID- gaaga iyo lambarkaaga. Dhibaatada la xaliyo, ama sida aad u malaynayso.
Marka xigta aad isku daydo inaad sameyso hees isku mid ah, waxaad heleysaa isla "khidad lagaa oggolaanin" fariin qalad ah.
Arrimo dhawr ah ayaa sababi kara isbeddelkan socda ee codsiyada oggolaanshaha.
Muusigga laga soo iibsaday Xisaab Macaamiisha kala duwan
Aniga ahaan, ugu yaraan, tani waa sababta ugu badan ee arimaha oggolaashada. Maktabadayda iTunes waxaa ka mid ah heeso aan iibsaday, iyo sidoo kale heeso ay xubnaha kale ee qoyska soo iibsadeen. Haddii aad gashid Aqoonsiga Apple iyo lambarkaaga sirta ah markaad la timaaddo, laakiin heesku wali waydiisanayaa oggolaansho, waxaa jira fursad wanaagsan oo la iibsaday iyadoo la adeegsanayo aqoonsi Apple ka duwan.
Macalinkaaga waa in loo oggolaadaa aqoonsi kasta oo Apple ID ah oo loo isticmaalo in lagu iibsado musikada aad rabto in aad ciyaarto. Dhibaatadu waa, ma xasuusan kartid aqoonsiga loo isticmaalay gabay gaar ah. Wax dhibaato ah maaha: Way fududahay in la ogaado.
In iTunes, dooro heeska codsanaya oggolaansho, ka dibna dooro " Get Info " ka soo rogo menu-ka. Waxaad sidoo kale aad xaq u dhigi kartaa heesaha oo aad doorato "Get Info" oo ka soo baxa menu-pop-up.
Daaqada Goobta Dakhli, waxaad doorataa Liiska Koobaad ama Faylka Faylka (taas oo ku xidhan qaybta iTunes aad isticmaaleyso). Liiskaan waxaa ku jira magaca qofka iibsaday heesaha, iyo sidoo kale magaca xisaabta (Apple ID) ee qofka isticmaalay. Waxaad hadda ogtahay nooca Apple ID in uu u isticmaalo si uu u oggolaado heesaha loogu talagalay ciyaarista Mac. (Waxa kale oo aad u baahan tahay furaha sirta ee aqoonsiga.)
Aqoonsiga Apple waa sax, laakiin iTunes Weli waa ka rabtaa ruqsad
Xitaa haddii aad isticmaasho Aqoonsiga Apple ee saxda ah si aad u oggolaato ciyaarta muusigga, waxaad weli arki kartaa codsi ku celis ah ee oggolaansho. Tani waxay dhici kartaa haddii aad gashan tahay Mac- kaaga adoo isticmaalaya xisaab user ah oo fudud, kuwaas oo aan lahayn xuquuqda saxda ah si aad u oggolaato iTunes in ay cusbooneysiiso faylasha gudaha iyada oo macluumaadka oggolaansho.
Isku qor oo dabadeedna dib ugu soo noqo adigoo isticmaalaya koonto maamul . Markaad ku qorto koontada maamulaha , bilaawdo iTunes, dooro " Kombuyuutarkan Kumbuyuutarkan " ka soo Dukaameysiga Dukaameysiga, waxaadna bixisaa Aqoonsiga Apple iyo lambarka sirta ah.
Soo gal, kadibna dib ugu soo gal lambarka koontadaada aasaasiga ah . iTunes waa inuu awoodaa inuu ciyaaro heesaha.
Haddii Aysan Heli Karin ...
Haddii aad weli ku xayirtay codsiga loojeedka looxa, ka dibna mid ka mid ah faylasha iTunes ay isticmaalaan habka oggolaanshaha ayaa noqon kara musuqmaasuq. Xalka ugu fudud ayaa ah inaad tirtirto faylka kadibna dib u soo celi Macadaada.
Ka jooji iTunes, haddii ay furan tahay.
Faylka ay ku jiraan faylasha aan u baahannahay si aan u tirtirno waa qarsoodi ahayn oo inta badan ma arki karo Finder. Ka hor inta aynaan tirtirin faylka qarsoon iyo faylasha, waa in aan marka hore ka dhigno waxyaabaha aan la arki karin. Waxaad ka heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo sameeyo tan Maqalkeena Haqiiqda ah ee Macluumaadkaaga Isticmaalida hagaha Jadwalka . Raac tilmaamaha tilmaan-bixiyaha, ka dibna halkan ku soo noqo.
Furo daaqada Finder iyo u sooc / Isticmaalayaasha / La wadaago. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa liistada Goer's Go menu si aad ugu booddo qaybta la wadaago. Xulo " Ka tag Fadhi " laga bilaabo Muujinta Go'aanka , ka dibna gali / Isticmaalayaasha / La wadaago sanduuqa wada-hadalka oo furan.
Hadda waxaad awoodi doontaa inaad aragto in faylka la wadaago ee la wadaago waa fayl la yiraahdo SC Info.
Dooro liiska xogta SC-ga oo ku jiid xashiishka.
Ku soo kabashada iTunes oo dooro "Kumbuyuutarkan Ogolow" oo ka soo dukaameysan dukaanka. Sababtoo ah waxaad tirtirtay diiwaanka SC-ga, waxaad u baahan doontaa inaad geliso Aqoonsiyada Apple-ka oo dhan muusikada la iibsado oo ku qoran Mac.
Qalab badan oo badan
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu dambeeyay ee aad ku jiri karto waa inaad leedahay qalab aad u badan oo la xiriira ID ID. iTunes waxay u ogolaataa ilaa 10 qalab oo ay ku wadaagaan muusikada maktabaddaada iTunes. Laakiin 10 ka mid ah, kaliya shan ayaa noqon kara kombuyuutarro (Mac ama kombiyuutaro ku jira barnaamijka iTunes). Haddii aad leedahay kombiyuutaro badan oo loo ogol yahay inaad wadaagto, ma awoodi doontid inaad ku darto wax kale oo dheeraad ah adoon marka hore ka saarin kombiyuutarka liiska.
Xusuusnow, in haddii aad la kulantay arrintan, waa inaad haysataa hanti akoonta iTunes oo muusikada aad isku dayayso inaad wadaagto isbedelada soo socda ee kombuyuutarkooda.
Ku soo bilaw fii iTunes oo dooro View View My Account ka menu.
Gali macluumaadka Aqoonsiga Apple-ga marka la codsaday.
Macluumaadka xisaabtaada waxaa lagu soo bandhigi doonaa iTunes. Ku dheji qaybta calaamadeysan ee iTunes ee daruuraha.
Riix badhanka Maareynta Maareynta.
Qeybta Maareynta Maareynta ee furan, waxaad ka saari kartaa mid ka mid ah qalabka taxan.
Haddii qalabka aad rabto inaad ka saarto waa qarsoodi, macnaheedu waa inaad hadda u saxiixday iTunes on qalabkaas. Waxaad u baahan tahay inaad marka hore saxiixdo ka hor inta aan laguu oggolaan inaad ka saarto liistada wadaagista qalabka.
Waxa la Qabanayo Marka Mashiinka Saacadaha Doonayo "Diyaarinta Dhamaan"
Lakin Icons Ka Maqan Macalinka Macalinkaaga?
Fiximaha Mac Wi-Fi Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka Wireless Diagnostic App
Dhibaatooyinka Dhageysiga iyo Muuqaal Sawirada Macmalkaaga
Kusoo dhawow Maktabadda Muusikada Muusikada ee iPod
Talooyinka ugu Saraysa 10 Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka La Macmiilo
U Isticmaal DNS si aad u Dajiso Webka aan kudhicin Browser-kaaga
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Maskaxda: Ku dhaji Barta Kudlada ama Muraayadda Madow
Halkee Xayeysiisyada laga furay Mac OS X Mail waa la dhigaa
Sida loo Hirgaliyo Wareegga Maaraynta Mac
Sida Loo Dhoofiyo Wareeggaaga Profile-kaaga
Ku darida USB gaaga Stereo gaari
Waa maxay File XML?
"Waalidiinta Waalidiinta ah 2 Dib Looga Dhow Yahay Carruurta" Dib u Eegista (PC)
Web Browsers ugu fiican iyo kuwa ugu xun
Baro Vgdisplay Command Command
Sida loo abuuro sawir 3D ah ee Rinji Microsoft 3D
Sida loo abuuro USB Drive Multiboot Isticmaalka Windows
Maxay Foomka MPL?
7da ugu wanaagsan ee kabiinka / mashiinka loo yaqaan "Best Cable Modem / Router Combos" si loogu iibsado 2018
Dell's printer qiimo jaban E310dw printer-ka laser-dabaq ah
Imo Instant Rasmiga ah iPhone App Review
Sidee loo xajin karaa shabakada Powerline Network
Miisaanka 3-aad: Barnaamijka Macmooyinka Tom ee Mac
Sida Spyware kuugu soo galaan Kombuyuutarkaaga ama Telefoonkaaga
Tilmaamaha Badbaadinta Gaadiidka DTV
Sida Loo Isticmaalo Jajabinta-iyo-Tixraac si ay ugu soo galaan fariimaha Gmail